En vente actuellement 22/01/2021
Ady amin’ny kere Napetraka ny WIFI maimaim-poana
Taorian’ny fametrahana ny « logiciel» keredata dia tafapetraka soa aman-tsara eo anivon’ireo
Distrikan’i Bealanana : nisitraka herinaratra hanatsara ny fanjarian-tsakafo
Notanterahina ny 06 sy 07 novambra lasa teo, tao amin’ny Distrikan’i Bealanana, Faritra Sofia ny hetsika « Festival Jiro Mazava ».
Natasha Van Rijn Solontena maharitry ny PNUD vaovao
Niova ny solontena maharitry ny firenena mikambana eto Madagasikara. Ramatoa Natasha Van Rijn no voatendry hisahana io andraikitra io eto amintsika manomboka izao. Tera-tany aostralianina ramatoa Natasha Van Rijn.
Amboasary Atsimo Fokontany 34 nisitraka « KALY TSINJO »
Fokontany miisa 34 ao amin’ny kaominina Amboasary, Distrika Amboasary Atsimo , no nisitraka « KALY TSINJO », akanjo fitafy isa-tokatrano avy amin’ny fitondram-panjakana izay nisoloan-dRamatoa Ministry ny Mponina MICHELLE Bavy Angelica tena nanomboka ny Talata 3 Novambra teo.
Androndrakely Zazavavy kely miisa 3 voaolana
Zazavavy kely miisa 3 indray no naolan’ny tovolahy iray 28 taona teny amin’ny faritra Androndrakely. Raha ny fitantaran'ireo ankizy ; araka ny filazan'ireo Ray aman-dreniny, dia notambazan’ilay lehilahy vola ireo ankizy,
Fanohanana ireo tantsaha Natomboka omaly ny Tetikasa Fandroso
Tontosa omaly teny amin'ny Carlton Anosy ny fanokafana tamim-pomba ofisialy sy ny fanombohan’ny tetikasa FANDROSO. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fahaleovan-tena ara-tsakafo ny tetikasa FANDROSO ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra.
Vidin’entana amin’ny faran’ny taona Ezahana tsy hiakatra
Nihena 60% -n’ireo mpandraharaha tratra nanafina entana, tamin’ny fotoanan’ny fihibohana, teto Madagasikara, araka ny nambaran’ny ministeran’ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana.